Igadi yePine-indlu yonke ehambahambayo ayabelani
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguTong
Molo mhambi ! Wamkelekile kwiHinton yethu entle apho ibhere yam izimele khona!
Le ndlu ibekwe kwipaki yetreyila ecocekileyo nethe cwaka.
Ngenxa yexesha elixakekileyo labakhenkethi basehlotyeni ixabiso lehotele ekufutshane nejaspisi kunye neebhanti zepaki yesizwe iya eluphahleni, ngoko ke khetha i-bnb yendawo yokuhlala ayizukuba lukhetho olubi kwiqela elithile lokuhamba losapho.
Iiyure ezingama-24 zesuper maket zikufuphi.
Indlu yethu iyafumaneka ukuze ibambe ukuya kuthi ga kwi-6 abantu ngosuku
Sinekhitshi esebenza ngokupheleleyo kwaye inxibelelana negumbi lokuhlala, ukuze ube nexesha lokonwaba nosapho ngelixa upheka. Iwasha kunye nesomisi zisimahla ukuba zisetyenziswe, zonke izicoci zempahla zibonelela. Kukho igumbi lokuhlala elongezelelweyo elinokusetyenziselwa irenti eyongezelelweyo yokuhlala okanye lisetyenziswe njengebhedi yomoya okanye igumbi lokudlala .zikho iindawo zokupaka ezi-4 ezikhoyo, zininzi. yegumbi lesithuthi sakho eside okanye esikhulu sokuhamba.
Sisondele ngokwenene kuhola wendlela, awuyi kuchitha ixesha lakho ekufumaneni indlela apha okanye ekufumaneni indlela yokuya kwipaki yesizwe yaseJasper, i-1 mins drive uya kuba usendleleni eya eyaspisi.
Kukho iivenkile ezinkulu ezingama-24/7 kufutshane nathi, yimizuzu emi-5 kuphela yokuhamba umgama ukuya kwivenkile enkulu ukuya kwivenkile yakwaMcDonald's kunye ne-Dq ice cream. Kukho ibala legalufa elihle elikufutshane nathi , unokuthatha uhambo olunoxolo nosapho emva kwesidlo sangokuhlwa kwaye uthathe imifanekiso
Umbuki zindwendwe ngu- Tong
hi we are a family from hinton
Ndizakube ndijikeleze le ndawo ukuba iindwendwe zethu zidinga uncedo olufana nokungena, ukufumana umkhombandlela wendawo, okanye nayiphi na eminye imiba malunga nendlu.
Ndikwavuya kakhulu ukuphendula nawuphi na umbuzo malunga nommandla ojikeleze undwendwe, ndiyakwazi ukucebisa indawo elungileyo yokutya ngaphandle okanye eyona ndawo intle yokhenketho ejikeleze ijaspisi kunye nommandla waseHinton.